ANTSIRANANA : Miaina ao anatin’ny fahatapahan’ny herinaratra ny mponina
Tato ho ato izay dia nisesy ny fahatapahan’ny herinaratra vokarin’ny orinasa Jirama aty Antsiranana. 12 septembre 2018
Araka ny fanambaràna nataon’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ity orinasa ity dia eo am-panatanterahana ny fanamboarana amin’ny ankapobeny ny mpiasa, ka izay voalaza fa mahatonga ny fahatapatapahan-jiro misy any Antsiranana.
Nanomboka ny faran’ny herinandro teo dia nitohy ny alatsinainy 10 septambra, hatramin’ny talata 11 septambra ny olana tamin’ny famatsiana jiro.
Manomboka ny maraina hatramin’ny hariva ny fahatapahana ka ny hariva vao tafaverina ny herinaratra. Araka izany, dia mikatso tanteraka ny asa amin’ ireo toerana mitavandra na miandry lava ny herinaratry ny Jirama ho an’ny asa fitadiavana ho an’izay tsy manana groupe.
Araka ny fanampim-panazavana hatrany fa haharitra telo andro misesy ny asa fanamboarana nanomboka ny alatsinainy lasa teo.
Amin’ny fisian’ny fahatapahan’ny herinaratra ity dia tsikaritra ihany koa fa mitsitapitapy ny tambajotra ho an’ny fifandraisana an-telefaonina sy Internet. Matetika tsy mahazo na tsy azo antso na ireo olona mifampiantso na koa mitarazoka ny fampiasana ny aterneto.
Efa manomboka leo ny fomba fiasa misy izay voalaza fa fanatsarana izay mampanahirana ny mpanjifa ny vahoakan’Antsiranana.
Vao tao anatin’ny telo andro no nanambarana fa misy fanamboarana, nefa efa am-bolana vitsivitsy no nisian’ny fahatapahana ifandimbiasana isaky ny fokontany aty an-toerana.
Hita araka izany fa efa mibaribary ny fisian’ny olana eo anivon’ny orinasa Jirama ity, ka lasa nahilika hoe fanatsarana amin’ny fisian’ny fanamboarana ny fahavoazana.
Andrasana araka izany afaka telo andro izay fe-potoana nomena fa efa empaka amin’ny fisian’ny fahatapahan’ny herinaratra ny vahoakan’Antsiranana. Niala ihany ilay Filoha nampanantena fanafoanana delestazy fa tsy afa-bela i Antsiranana.